ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် နည်းပညာအကူအညီများပေးခြင်းသည် ပိုမိုအကျိုးရှိသည်ဟု ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ပြောကြား | Myanmar Digital News
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဒေသခံများဆောင်ရွက်နိုင်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ နည်းပညာများ ကူညီပေးခြင်းက ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဘဝရပ်တည်ရေးအတွက် ပိုမိုအကျိုးရှိ အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး ပြည်သူလူထုကလည်း ပိုမိုလိုလားကြမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Taro KONO အား ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ် နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI၊ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Shigeki TAKIZAKI၊ ဂျပန်နိုင်ငံစစ်သံမှူး Col.Kei TAJIKA နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်တိုးတက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ၊ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းရာ၌ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အထောက်အကူပေးမှုများ၊ အာရှဒေသ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် တပ်မတော်မှ အကာအကွယ်ပေးဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံက အကူအညီပေးမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများအား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။